Tag: xiriirka hal-ilaa-hal | Martech Zone
Tag: xiriirka hal-ilaa-hal
Sida Loo Kordhiyo Iibsiga Boostada Iibsigaaga Istaraatiijiyad Haysashada Macaamiil oo Waxtar Leh
Jimco, Nofeembar 27, 2020 Jimco, Nofeembar 27, 2020 Oliva Saikia
Si loo kobco loona noolaado ganacsiga, milkiileyaasha ganacsatadu waa inay qaataan farsamooyin iyo xeelado fara badan. Istaraatiijiyadda haynta macaamiisha ayaa muhiim ah maxaa yeelay way ka waxtar badan tahay istiraatiijiyad kasta oo suuq-geyn ah marka ay timaado kordhinta dakhliyada iyo wadista soo noqoshada maalgashigaaga suuq geyn. Helitaanka macmiil cusub waxay ku kici kartaa shan laab ka badan inta lagu hayo macaamiisha jirta. Kordhinta haynta macaamiisha 5% waxay kordhin kartaa macaashka 25 ilaa 95%. Heerka guusha ee ka iibinta macaamiil